‘ननलाईन पत्रकारिता’ र धुर्मुसेको लेटेस्ट हिसाब-किताब… « Gajureal
‘ननलाईन पत्रकारिता’ र धुर्मुसेको लेटेस्ट हिसाब-किताब…
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०८:५६
म धुर्मुसको प्रबक्ता होईन, फाउन्डेसनको कार्यकर्ता पनि हैन तरपनि उ सफल हुँदा मेरो छाती गर्वले ढक्क फुल्छ, असफल हुँदा पिरले अनुहार चाउरिन्छ । किनभने, धुर्मुस मेरो भाइ हो, सहकर्मी हो, सहयोगी हो । २०५६ को गौरादहमा भएको मेरो कार्यक्रमको स्वयंसेवक ‘सिताराम’देखि हालको कलाकार अभियन्ता ‘धुर्मुस’सम्मलाई म चिन्छु । गिरानचौर निर्माणदेखि वीर अस्पताल सफाईसम्म हामी सँगसँगै छौँ ।
यी अभियानप्रती लाखौं शुभ-चिन्तकहरुको ठूलो सहानुभूति छ । यो समुह एउटा बलियो सामाजिक शक्तिको रुपमा उदाएको छ । धुर्मुस त्यसको एउटा पिलर हुन् । पिलरलाई दह्रो बनाउने बागमती सफाई अभियान, सिस्नुपानी नेपाल, धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसन, खेम्स क्लिनिङ लगायतका सिमेन्ट, बालुवा र इटाहरु छौँ । तिनै एक पिलरको सेवाभाव तथा इमानदारितामाथी सवाल उठ्दा जवाफ दिने दायित्व हाम्रो पनि हो ।
१.फाउन्डेसनको हिसाब-किताब त गोलमाल छ रे त ?
– धुर्मुसले भन्दै आएकाछन् , एक पैसा तलमाथी भएको प्रमाण भेटिए मर्न तयार छु । त्यसलाई नियमन गर्ने सरकारी निकायलाई शंका लागे अनुसन्धान थालिहाल्नु पर्छ । कोहीपनी बित्तिय अनुशासनभन्दा माथी हुन सक्दैन । शक्तिशाली पत्रकारिता क्षेत्रले खोजबिन पनि गर्नसक्छ । तर हचुवाका भरमा कसैको इमेजलाई ड्यामेज पार्ने ‘ननलाईन पत्रकारिता’ भने खेदजनक छ ।
२. सरकारभन्दा माथी हुन खोज्यो रे नि त ?
– यदि धुर्मुसले मनको कुनै कुनामा त्यस्तो केही सोचेका छन् भने त्यो उनको गम्भीर गल्ती हुनेछ । तर मैले चिनेको धुर्मुसले त्यो स्वैर कल्पना गरेको छ जस्तो लाग्दैन । राज्यले चाह्यो भने ठुल्ठुला आन्दोलन त दबाउँन सक्छ भने एउटा अभियानलाई कमजोर नपार्ने कुरै भएन । तर राज्यलाई हाम्रो सुझाव छ, सामाजिक अभियान एउटा सकात्मक शक्ति हो । यस्लाई कुनैपनी नाममा निरुत्साहित पार्नुहुन्न । नत्र यस्ता अभियानहरु अराजकतातिर गएर राज्यलाई नै अपठ्यारो पार्ने हैसियत राख्दछन् ।
३. समाजसेवा गरे भैहाल्यो नि, धेरै प्रचारमुखी किन हुनु ?
– हो । सेवा आत्म-सन्तुष्टिका लागि हुनुपर्छ, आत्म-प्रचारका लागि हैन । चुपचाप चारआना, हल्ला गरे बाह्रआना भन्छन् । तर, धुर्मुसको अभियान जनताको सहयोगबाट चलेको हुनाले प्रचार एक हदसम्म जरुरी थियो तर अब कम गर्नुपर्छ । समता शिक्षा अभियानका उत्तम सन्जेललाई हेरौं । उनले ७५ हजारभन्दा बढीलाई जम्मा एकसय रुपैयाँमा पढाइ रहेकाछन्, त्यो पनि नर्सरीदेखी नर्ससम्म ! न उनी समाचारका हेड लाईन बन्छन् नत न्युज मेकर हुन्छन् । उत्तम सन्जेल चुपचाप सिङ्गै सार्क राष्ट्रमा शिक्षाको क्रान्ती गर्दैछन् । यसरी काम गर्नुपर्छ ।
४. कलाकारले त कलाकारिता पो गर्ने त, दायाँ बायाँ किन ?
– किनकी कलाकार राष्ट्रको सर्वाङ्ग हो । उसलाई राजनितीदेखी समाजसेवा, उत्प्रेरणादेखी आन्दोलन, सबै कुराको जानकारी हुन्छ । जहाँ आवस्यकता पर्छ, कलाकारले आफुलाई सोही अनुसार ढाल्न सक्छ । कला जनताको खुशिको लागि हो भने समाजसेवा जनताको सुख र आफ्नो खुशिका लागि हो । सेवाबाट प्राप्त हुने आनन्द ‘उध्योग-धन्दा’बाट प्राप्त हुने नाफाभन्दा मीठो हुन्छ । एउटा कुराचाहि सत्य हो, समाजसेवालाई ‘दोकान’ बनाउनु भएन । हामी सबैले जोगिनु पर्ने ठाउँ यही हाे ।
५. अनि किन प्रश्न उठ्यो त धुर्मुसमाथी ?
– प्रश्न उठ्नु पर्छ त्यसैले उठ्यो । जनताले हरेकलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । जनता चुपचाप बस्यो भने राज्य तानाशाही र ब्यक्ती भ्रष्ट हुन्छ । तर अहिले उठेका प्रश्नहरु सुधार्ने भन्दापनी उधार्ने किसिमले आएका देखिन्छन् । धुर्मुसले पनि एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ, अग्लो मान्छे झुक्न छोड्नु हुन्न । बाँकी, कोहि कसैको लोकप्रियताबाट जलेर, चर्चाबाट अतालिएर, सफलताबाट लोभिएर प्रश्न उठाउनेहरुलाई चाहिँ यतिमात्र भन्न सकिन्छ, सबैले आ -आफ्नो कर्मको फल पाउने हो । अर्काको लोकप्रियतालाई आफ्नै सफलता ठान्दा मनमा आनन्द आउँछ, जल्न थाल्दा रोग लाग्छ ।
६. धुर्मुसेले अब के गर्छ, कलाकारिता कि समाजसेवा ?
– दुबै गर्नु पर्छ । दुईचार ओटा आलोचना, आठ दशवटा बिरोध, बाह्र चौधवटा प्रश्नहरुले शक्तिशाली स्रस्टाको आत्मबिश्वास हल्लिनु हुँदैन । सत्य रुँन खोज्दा सम्हाल्ने हजारौं साथहरु छन् । इमानदारिता ढल्न खोज्दा उठाउने लाखाैं हातहरु हुन्छन् ।
गिरान्चौर नमुना बस्ती
समाजसेवाको क्षेत्रमा उसले आफ्नो स्थान उँचाे बनाएको छ तर धुर्मुस पहिला कलाकार अनि मात्र समाजसेवी हो । अब समाजसेवाको क्षेत्रबाट हात लागेको प्रतिष्ठालाई संरक्षण गर्दै समाज उपयोगी कलारितालाई नै काँधमा बोक्नु पर्छ । लाखौं जनता हाम्रो हाँसाे कुरि रहेकाछन् , दुईचार वटा नकारात्मक मान्छेका कुरामा किन चित्त दुखाउनु हौ जेठा ! हैन त माईला ?
तपाईंको मन हँसाउने आजका रमाइला चुट्किलाहरु
श्रीमती : ‘सुन्नु न, किचनमा दाल मात्र पकाएकी छु, पाहुना आउदैछन् के गरौ ?’ श्रीमान